‘Dhacdo Layaab leh’ Rag loo xiray 10 danbiil oo ukun ah oo ay xadeen…. | Baahin Media
‘Dhacdo Layaab leh’ Rag loo xiray 10 danbiil oo ukun ah oo ay xadeen….
Apr 30, 2019 - jawaab
Sida ay qortay warbaahinta Standard ee kasoo baxda dalkan Kenyan, booliska Kenya ayaa xiray afar qof oo lagu tuhmayo inay 10 danbiil oo ukun ah ka xadeen beerta madaxweyne kuxigeenka Kenya William Ruto. Ukunta oo laga xaday beerta oo ku taal deegaanka Uasin Gishu ayaa ku fadhida lacag dhan 2,500KSh oo qiyaastii u dhiganta $25.
Boolisku waxay sheegeen in afarta qof ay ka shaqeeyaan beerta madaxweyne ku xigeenka ee digaaga lagu dhaqo. Taliyaha saldhiga galbeedka Eldoret Zachariah Bitok ayaa sheegay in dadka oo ka kooban labo rag ah iyo labo dumar ah su’aalo lagu weydiinayo saldhiga oo ay xidhan yihiin.
Boolisku waxay Wargeyska The Standard u sheegeen in maamulaha beerta kusoo wargeliyay ukunta maqan kadib markii uu arkay ukun meel beerta ka mid ah ay ku qarsadeen afarta qof ee eedeysan. Booliska ayaa Dembi-baareyaal geeyay beerta.
Beertan digaaga lagu xanaaneeyo waxaa iska leh madaxweyne kuxigeenka Kenya. Waxaa maamula dad qoyskiisa ka mid ah oo ay Kor-joogteyso xaaskiisa Rachel Ruto.
Taliyaha Saldhiga booliska ee Galbeedka Eldoret wuxuu sheegay inay wadaan baaritaan ay ku ogaanayaan haddii shaqaalaha loo xidhay inay ukumaha xadeen la shaqeynayeen dad kale. Beerta waxaa ilaaliya ciidamada booliska ee GSU loo yaqaan.
Beertu waxay ukunta digaaga u iibgeysaa suuqyada Waqooyiga Rift iyo Nayroobi. Afarta eedeysane ayaa lagu wadaa in maxkamada la soo saaro dhawaan.